Xigashooyinka Charlie Munger: Taariikh nololeedka iyo 70ka weedho ee ugu caansan | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Xigasho Charlie Munger
Mid ka mid ah maalgashadayaasha caanka ah ee Mareykanka ah waa Charlie Munger. Ka sokow inuu saaxiib iyo rafiiq la yahay maal-qabeenka maalgashiga Warren Buffett, Munger sidoo kale waa mid ka mid ah ragga adduunka ugu taajirsan. kaasoo wadarta hantidiisa haatan lagu qiimeeyay $ 2,1 bilyan. Sheekadiisu waa mid murugo leh edab badan iyo dadaal aakhirkii wuxuu ku guuleystay inuu gaaro xorriyadda dhaqaale. Xigashooyinka Charlie Munger waxay ka turjumayaan noloshiisa adag iyo aqoontiisa dhaqaale.
Qofka awood u yeeshay inuu ka soo kaco qarka u burburka inuu ka mid noqdo dadka ugu taajirsan waxaa jira tWuxuu leeyahay xikmado iyo waaya-aragnimo badan oo uu soo gudbiyo. Taasi waa sababta aan uga hadli doonno maqaalkan wax yar oo ku saabsan cidda maalgashahan weyn yahay iyo xigashooyinka toddobaatanka ugu caansan Charlie Munger.
1 Charlie Munger's 70 Xigashooyinkii Ugu Caansanaa
2 Waa kuma Charlie Munger
Charlie Munger's 70 Xigashooyinkii Ugu Caansanaa
Xikmadda uu maal-qabeenkan weyn soo gudbin karo waddo dheer ayuu mari karaa. Thanks to weedhaha Charlie Munger waxaan heli karnaa dhiirigelin iyo caawimaad maaha kaliya dhaqaalaha adduunka, laakiin sidoo kale nafteena si aan u xoojino edbintayada iyo rabitaankeenna akhriska, Hagaag, waa nin aad u dhaqan badan oo difaaca muhiimada ay leedahay helitaanka aqoon cusub maalin walba. Marka xigta waxaan arki doonnaa 70-ka weedhood ee ugu caansan Charlie Munger.
Had iyo jeer qaado wadada dheer, way ka yartahay safarka dadku.
"Waxa ugu fiican ee bini aadamku sameyn karo waa inuu ka caawiyo qof kale oo bini aadam ah inuu wax badan ogaado."
"Xusuusnow in sumcadda iyo sharafnimadu ay yihiin hantidaada ugu qiimaha badan, isla markaana lagu lumi karo meel ka baxsan iftiinka."
"Qaado fikrad fudud oo si dhab ah u qaad."
Waxaan aaminsanahay anshax marinta sida ugu wanaagsan ee ay dadka kale ogaadeen. Ma aaminsani in aan fadhiisto oo aan isku dayo in aan ku riyoodo naftaada oo dhan. Qofna caqligaas ma leh.
Dadku waxay xisaabiyaan wax aad u badan waxayna u fikiraan in yar.
Inta badan qaladaadka nolosha waxaa sababa in la iska ilaawo waxa uu qofku runtii isku dayayo inuu sameeyo.
Waxaan haynaa seddex dambiil oo aan maalgashan karno: haa, maya oo aad ayey u adagtahay in la fahmo.
“Waxaad ubaahantahay dabeecada inaad la fariisato lacagtaas oo dhan oo aadan waxba qaban. Ma aanan gaarin halka aan joogo, waxaan raacayaa fursado aan caadi aheyn. "
Waxay weydiiyeen, maxay yihiin sirta guusha? jawaabtiisu waxay noqotay: Caqli gal noqo ”.
“Si aad u hesho waxa aad rabto, waa inaad u qalantaa waxa aad rabto. Adduunku weli maaha meel waalan oo ku filan oo lagu abaalmariyo dad badan oo aan u qalmin. "
"Waxa kaliya ee aan doonayo inaan ogaado waa halka aan ku dhimanayo oo aanan waligey aadi doonin."
“Ma jiro hal qaacido. Waxaad u baahan tahay inaad waxbadan ka ogaato ganacsiga iyo dabeecadda aadanaha iyo tirooyinka reasonable Caqli gal ma aha inaad filayso inay jiraan nidaam sixir oo adiga laguu sameeyo
Dheg jalaq uma siinin xudduudaha xaddiga cilmiga tacliinta ee waxaan qabsaday uun fikradaha waaweyn ee aan kari karo.
"Haddii aysan dadku khaladaad sameynin inta badan, maanaan noqon lahayn taajir."
Noloshayda oo dhan, lama kulmin dad caqli badan (maaddo ballaadhan) oo aan akhriyi jirin waqtiga oo dhan, midna, eber. Waad layaabi laheyd inta Warren Buffet wax aqriso iyo inta aan aqriyo. Carruurtaydu way igu qoslaan. Waxay u haystaan ​​inaan ahay buug ay labada lugood isku dhejinayaan ”.
Ilaa iyo inta aan gacanta ku haysto buug, ma dareemayo inaan waqtigayga luminayo.
"Waxaan isku dayaa inaan ka takhaluso dadka had iyo jeer si kalsooni leh uga jawaaba su'aalaha aan aqoon dhab ah u lahayn."
Ku dayashada lo'da waxay ku martiqaadeysaa dib u noqosho celceliska dadka. "
"Lacagta weyn kuma jirto iibka iibka, laakiin waa sugitaanka."
Sababtoo ah inaad jeceshahay taas macnaheedu maahan in adduunku qasab ku siin doono adiga.
"Waxaan raadineynaa faras haysta fursada 50% ee guusha oo la siiyo 3 ilaa 1."
Xeerka birta ah ee dabeecadda waa: waxaad heleysaa waxaad u qalanto. Haddii aad rabto qudhaanjo inay timaado, waxaad dhulka dhigaysaa sonkor ”.
Hubka ugu wanaagsan ee gabowga waa nolol si fiican loo soo qaatay oo iyada ka horreysa. "
“Algorithm-ka weyn ee la xasuusto markii lala macaamilayo isbeddelladani waa mid fudud: fikrad ama xaqiiqda ayaa u qalantaa intaa ka badan, si fudud maxaa yeelay si fudud ayaa laguu heli karaa.”
“Sidee dhaqaalaha u noqon karin dhaqan? Haddii aysan dabeecad ahayn, waa maxay cadaabtu?
"Beta iyo aragtida faylalka faylalka casriga ahi macno iima samaynayso."
"Xaasidnimadu waa dambi runtii nacasnimo ah maxaa yeelay waa dambiga kaliya ee aadan weligaa ku raaxeysan karin."
“Waxaa jira xanuun badan oo aan xiiso lahayn. Maxaad u dooneysaa inaad raacdo gaarigaas?
"Haddii aadan fahmin xisaabta aasaasiga, laakiin wax yar oo aan dabiici ahayn, xisaabta itimaalka aasaasiga ah ee ku jirta qoraalkaaga, markaa waxaad ku dhex mari doontaa nolol dheer sidii nin lug keliya ku tartamaya tartan haraati ah."
“Haddii wax aad u adag yihiin, waxaan u dhaqaaqeynaa wax kale. Maxaa intaas ka fudud?
“In lagu horumariyo is-barasho nololeed oo dhan adoo u maraya akhris aan fiicnayn; kobci xiisaha oo ku dadaal inaad maalin kasta caqli yar yeelato. "
"Sariirta tag si ka caqli badan markii aad toostay."
Uma baahnid inaad noqotid qof caqli badan, waxyar uun ka caqli badan ragga kale, celcelis ahaan, muddo dheer.
Soo hel xikmad aduunyo kuna hagaaji dhaqankaaga si waafaqsan. Haddii habdhaqankaaga cusubi ku siiyo wax aan ku jeclaanayn ku meel gaadhka ah kooxda asxaabtaada ah ... ka dibna cadaabta iyaga la. ”
"Farqiga u dhexeeya ganacsiga wanaagsan iyo kan xun ayaa ah in kan wanaagsan uu inta badan la kulmo go'aanno fudud kan xunna uu inta badan la kulmo go'aanno xanuun badan."
Qof ayaa had iyo jeer kaa taajirnaan doona adiga. Tani masiibo ma ahan ”.
Inaad ogaato waxaadan aqoon waxay ka faa iid badan tahay inaad noqotid dhalasho.
Waxaan labadeenuba (Charlie Munger iyo Warren Buffett) ku adkaysanahay in waqti la heli karo ku dhowaad maalin kasta si loo fadhiisto loona fikiro. Taasi aad ayey ugu yartahay ganacsiga Mareykanka. Waan aqrinaa oo fikirnaa ”.
"Ma jiro macalin ka wanaagsan taariikhda, si loo go'aamiyo mustaqbalka ... Waxaa jira jawaabo u qalma balaayiin doolar oo ku jira buugga taariikhda $ 30."
Sidee ku heli kartaa xaas wanaagsan? -Sida ugu fiican waa inaad u qalanto xaas wanaagsan ”.
Waxaan dhamaanteen baraneynaa, wax ka beddeleynaa ama burburinaynaa fikradaha markasta. Si dhakhso leh u baabi'iya fikradahaaga markay wakhtigu ku habboon yahay waa mid ka mid ah sifooyinka ugu qiimaha badan ee aad ku kasban karto. Waa inaad naftaada ku qasabtaa inaad tixgeliso doodaha dhinaca kale ka socda. "
"Waallida dadka, u janjeedha dadka, duruufaha qaarkood, si ay ugu ekaadaan lemmiyada, ayaa sharraxaysa fikirka doqonnimada ah ee ragga xariifka ah iyo dhaqanka doqonnimada weyn."
Tusaalaha nidaamka runta masuulka ah waa nidaamkii ay adeegsadeen Romaanku markay dhisayeen qaanso. Ninkii abuuray qaansada ayaa ku hoos jiray markii la saaray santuuqa. Waxay u egtahay inaad xirxirto baarashuudkaaga. "
“Ka fogow xanuunka; diidmo nafsi ah. Qofku waa inuu garwaaqsado xaqiiqda xitaa marka uusan isagu jeclayn. "
“Warren wuxuu ka hadlayaa qulqulka lacageed ee dhimay. Weligay ma arag isagoo mid samaynaya. ”
"Dhammaan maal-gashadayaasha sinnaanta, guud ahaan, waxay u badan tahay inay lahaan doonaan dib-u-dhac sanadle ah oo la mid ah wadarta kharashyada ganacsatada ay si wadajir ah u doorteen inay qaadaan. Tani waa xaqiiqo nololeed oo aan laga gudbi karin. Sidoo kale waa wax aan laga gudbi karin in dhab ahaan kala bar maalgashadayaashu ay helaan natiijo ka hooseysa celceliska natiijada ka dib markii ay qaateen ganacsatada, kuwaas oo celcelis ahaan natiijadooda laga yaabo inay u dhexeyso wax yar oo xiiso leh iyo nacasnimo ”
Inaad iloowdo qaladaadkaaga waa qalad aad u xun haddii aad isku dayeyso inaad hagaajiso garashadaada. Xaqiiqadu kuma xasuusato. Maxaa diidaya in loo dabaaldego waxyaabaha doqonnimada ah ee labada qayboodba?
“Maalgashadayaashu si joogto ah ugama badin karaan suuqa. Sidaa darteed, waxaa sida ugu fiican loogu adeegi karaa iyada oo la maal-galiyo noocyo kala duwan oo miisaaniyado qiimo jaban ama (lacagaha lagu sarrifto) ”.
“Sababta aan uga fogaanayno erayga 'iskudhaf' waa dadka oo guud ahaan sheegta faa iidooyin badan oo isdhaafsi ah inta soo socota. Haa way jirtaa laakiin waxaa jira balanqaadyo badan oo been ah. Berkshire waxaa ka buuxa isku duubni, kama fogaano iskudhafka, kaliya sheegashada isku xirnaanta. "
"Waxaan isku dayeynaa wax badan si aan uga faa'iideysano had iyo jeer xusuusashada waxa muuqda, intii aan ka fikiri lahayn fikirka asaliga ah."
"Waa doqonimo sida ay dadku ugu macneeyaan wixii la soo dhaafay mana ahan doqon yar, laakiin waa nacasnimo baaxad leh."
"Waa wax cajiib ah sida badan faa'iidooyinka muddada-dheer ee dadka nala midka ahi ay uga heleen isku dayga inay noqdaan kuwo aan joogto ahayn doqonnimo, halkii aan ka ahaan lahaa kuwa caqli badan.
“Waa inaad ku sii jirtaa waxa aan ugu yeeray wareeggaaga aqoonta. Waa inaad ogaataa waxaad fahantay iyo waxa aadan fahmin. Maaha wax aad u muhiim ah sida ay goobadu u weyntahay. Laakiin aad ayey muhiim u tahay inaad ogaato halka wareegga uu ku yaal ”.
"Waxaan leenahay dabacsanaan badan iyo anshax gaar ah marka la eego inaanan sameynin wax doqonimo ah si aan u firfircoonaano, anshax si looga fogaado kaliya wax kasta oo xumaan ah in la sameeyo kaliya maxaa yeelay ma adkaysan kartid inaad noqoto qof firfircoon.
“Berkshire waxaa ka buuxa dad leh rabitaan gaar ah oo ku saabsan ganacsigooda. Waxaan dhihi lahaa xiisaha ayaa ka muhiimsan awoodda maskaxdeenna ”.
Shirkadaha waawayn guud ahaan waxay ka siman yihiin guud ahaan waxay tahay inay helaan xafiisyo shaqo. Dabcan sidoo kale waxay ku dhacdaa dowladda sidoo kale. Iyo, asal ahaan, ma jecli xafiiska shaqada, waxay abuurtaa qaladaad badan. ”
Labadeenaba waxaan ku adkeysaneeynaa in waqti la heli karo ku dhowaad maalin kasta si loo fadhiisto loona fikiro. Taasi aad ayey ugu yartahay ganacsiga Mareykanka. Waan aqrinaa oo fikirnaa. Marka aniga iyo Warren waxaan samaynaynaa aqrin iyo fikir badan inta badan dadka ganacsiga ku jira. "
“Waa inaad ka fikirtaa inay noloshu adkaan doonto oo aad isweydiiso inaad qaadan karto iyo hadii jawaabtu haa tahay, markaa dhoola cadee oo horay u soco.
"Waa inaad leedahay xiiso qiiro leh oo ku saabsan ogaanshaha sababta ay wax u dhacaan. Habkan fekerka, oo la qabtay muddo dheer, wuxuu si tartiib tartiib ah u hagaajinayaa awooddaada inaad diiradda saarto xaqiiqda. Haddii aadan haysan sidan fekerka ah, waxaa lagu wadaa inaad guul darreysato xitaa haddii aad leedahay IQ sare. "
“Fikradda ah in laga fogaado amniga Dardaaranka Graham waligiis ma duugoobi doono, fikradda ah in suuqa laga dhigo addoonkaaga marna taariikh ma noqon doono. Fikradda ah in la hiigsado oo aan la cusbooneysiin weligeed taariikh ma noqon doonto. Marka Graham wuxuu lahaa fikrado badan oo cajiib ah. "
Bangigu waa ganacsi gaar ah. Imtixaanada loo soo bandhigo agaasimaha guud si uu u sameeyo wax nacas ah ayaa aad uga weyn bangiyada marka loo eego shirkadaha badankood. Sidaa darteed, waa meel khatar ah in la maalgashado maxaa yeelay waxaa jira qaabab badan oo bangiyada loo maro si mustaqbalka dhow looga dhigo mid wanaagsan iyadoo la qaadanayo khataro aan dhab ahaan loo baahnayn inaad qaadatid mustaqbalka fog. Marka bangiguna waa meel khatar ah oo maalgashi waxaana jira waxyaabo ka reeban. Berkshire wuxuu isku dayay inuu doorto waxyaabaha ka reeban sida ugu wanaagsan ee ay kari karto. Ma lihi wax kale oo aan ka idhaado mowduucaas, marka laga reebo inaan hubo inaan saxanahay.
Iska ilaali inaad si toos ah uga hoos shaqeyso qof aadan jecleyn oo aadan rabin inaad la mid noqoto isaga.
"Noloshu, qayb ahaan, waxay u egtahay sida ciyaarta turubka, taas oo ay tahay inaad barato inaad quusato mararka qaarkood markaad gacanta ku hayso gacal aad u qaali ah, waa inaad barataa sidaad ula tacaali lahayd qaladaadka iyo xaqiiqooyinka cusub ee wax ka beddelaya qaddiyadaha."
"Maalgashi kasta oo caqli badan waa maalgashi qiime leh, oo hela wax ka badan inta aad bixinayso."
Maskaxda aadanaha ee aan dhameystirneyn iyo awooda xaddidan ayaa si fudud loo weeciyaa si ay ula shaqeyso waxa si fudud loo heli karo. Maskaxduna ma adeegsan karto waxa ayna xasuusan karin ama goorta laga xannibayo inay aqoonsato maxaa yeelay waxaa si xoog leh u saameeya hal ama in badan oo dabeecado nafsi ah oo saameyn xoog leh ku leh ... qaab dhismeedka qoto dheer ee maskaxda bina aadamka waxay u baahan tahay wadada loo maro aqoonta nooc kasta oo ficil ah nooc kasta ha noqotee waxay baraneysaa wax walba oo si fiican ugu hadla haddii aad jeceshahay iyo haddii kaleba.
Waxaan la kulmay dadka indheer garadka ah ee ugu caansan, si dabiici ah, buugaag, fasalka kuma baran. Ma xasuusan karo markii ugu horreysay ee aan akhriyo Benjamin Franklin. Markii aan ahaa toddoba ama sideed jir waxaan sariirtayda saarnaa Thomas Jefferson. Qoyskeygu way jeclaayeen dhammaan waxyaalahaas oo dhan: inay ku sii socdaan anshax, aqoon iyo is-xakameyn
Waxaan si joogto ah u arkaa dad nolosha ka kacaya oo aan ahayn kuwa ugu caqliga badan, mararka qaarna aan xitaa ahayn kuwa ugu dadaalka badan, laakiin waxay yihiin makiinado wax lagu barto. Waxay seexdaan habeen kasta waxoogaa ka caqli yar sidii ay ahaayeen markii ay kiciyeen taasina way caawinaysaa, gaar ahaan markaad wado dheer kaa horayso. ”
“Sida Warren oo kale, waxaan u hamuun qabay inaan taajir noqdo, maahan inaan doonayo Ferraris, waxa aan doonayay waxay ahayd madax-bannaanideyda dhaqaale. Waxaan aad u doonayay iyada. "
Bixiya maalin kasta isku dayga inaad ka yara caqli badnaato sidii aad ahayd markii aad toostay. Maalinba maalinta ka dambaysa, iyo maalinta aakhirkeeda, haddii aad noolaato waqti kugu filan sida dadka badankiis, waxaad ka heli doontaa waxa aad u qalantay nolosha. "
Waa kuma Charlie Munger
Sannadkii 1924-kii, maal-galiyaha Mareykanka ah ee Charlie Munger wuxuu ku dhashay magaalada Omaha ee gobolka Nebraska. Markuu 29 jir ahaa, xaaskiisa ayaa furay, taasoo keentay luminta hantidiisii ​​Charlie Munger. Asal ahaan waxaa looga tagay gurigiisa qoyskiisa oo ku yaal Pasadena, California. IYODhacdadani waxay isaga tagtay inuu ku dhowaad jabiyo. Sidoo kale, dhowr bilood kadib, wiilkeeda siddeed jirka ah, Teddy, waxaa laga helay cudurka leukemia. Cudurkan ayaa sababay dhimashadiisa sanad kadib.
Si kastaba ha noqotee, Charlie Munger kama quusan nolosha iyo hadda waa mid ka mid ah dadka adduunka ugu taajirsan, iyo lamaanihiisa Warren Buffett. Taasi waa sababta ereyada Charlie Munger ay u noqon karaan kuwo xiiso gaar ah leh. Isagu waa madaxweyne ku xigeenka shirkadda Berkshire Hathaway, oo ah shirkad heysata, oo leh dhammaan ama qayb ka mid ah saamiyada kooxo ganacsi oo kala duwan. Sida saaxiibkiis Warren Buffett, Charlie Munger ayaa sidoo kale ugu deeqay dhowr milyan sababaha samafalka ah.
Sidoo kale waa in la ogaadaa in maalgashadan weyn uu jecel yahay cilmu-nafsiga. Maxaa intaa ka sii badan: Wuxuu qoray buug la yiraahdo "Poor Charlie's Almanack." Halkaas ayuu ku lafagurayaa 25 eexasho garasho oo saameyn ku leh awoodda go'aan qaadashada dadka, curyaaminta ficilkan. Sabab kale oo uu Charlie Munger u soo xigto waxay noqon kartaa mid aad u xiiso badan.
Sida muuqata, kuwan 25 eexirashada garashada ah waxay noqon karaan kuwo aad u awood badan markay tahay inay saameyn ku yeeshaan ama ku qanciyaan qof markay tahay inay go'aan gaaraan. Sababtaas awgeed ayaa loo adeegsan jiray taariikhda oo dhan si shakhsiyaad iyo dad badanba gaaro go'aanno loo qaadan karo caqli-xumo. Buugga, Charlie Munger wuxuu kaloo ka hadlayaa "Lollapalooza Effect," taas oo asal ahaan ah saameynta xooggan ee adeegsiga eexyo badan isla waqti isku mid ah. Ficilkani wuxuu badiyaa kordhiyaa fursadaha ay dadku ugu dhaqmi doonaan si aan macquul ahayn markay go'aan gaaraan.
Waxaan rajeynayaa in weedhahaagu ay kugu dhiirrigeliyeen labadiinaba suuqa saamiyada, iyo inaad u kortaan dad ahaan. Way cadahay in weedhaha Charlie Munger ay ka buuxaan xigmad iyo sannado khibrad u leh adduunka dhaqaalaha iyo nolosha lafteeda. Waxaad kaga tagi kartaa fikradahaaga faallooyinka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Xigasho Charlie Munger
Luis Felipe Ortiz Reyes dijo
Weedho aad u fiican ». Waxay ku casuumaan milicsiga.
Jawaab Luis Felipe Ortiz Reyes
Sida loo maalgashado cryptocurrencies